Hyoiu — Steemit
5 Siyaabaha Barashada Luuqad Cusub Waxay Ka Caawin Kartaa Awooddaada Shaqada
Isgaadhsiintu waa lacagta dhabta ah ee caalamiga ah. Waa arrin ku haysa muraayadaha aduunka ee caalamiga ah ee ku soo kordhaya adduunkeena sii kordhaya.
Barashada luuqad cusub waxay (macno ahaan) u furi kartaa adduun cusub oo cusub, fursado bulsho ahaan iyo dhaqankaba.
Laakiin waxa ku saabsan xirfaddaada - waxbaaro luuqad cusub ayaa noqon karta mid caqli gal ah oo lagu guuleysto oo ku siiya faa'iidada tartanka?
Jawaabtu waa dib u dhac "haa".
Halkan waxaa ah 5 sababood oo cajiib ah sababta aad u baran laheed luqad cusub waxay kobcin kartaa fursadahaaga shaqo:
Soo saar fursado cusub
ka soo iibinta iyo suuqgeynta dalxiiska, ka soo bangiga ilaa sharciga iyo shaqada dawlada si loo baro. Dareenka turjubaanada iyo turjubaanada ayaa kor u kacaya hadda, adigana waxaad isku kalsoonaan kartaa inaad kor ugu qaaddo dusha sare ee luqadaha.
Samee lacag dheeraad ah
Sida laga soo xigtay cilmi baarista ka timid hay'adda shaqaalaynta ee London, Euro London, oo ku hadlaya luqad shisheeye waxay kordhin kartaa awooddaada shaqo ee ilaa 15% .Luuqado badan oo aad ku hadashid iyo sida aad uhesho ayaad u hadashaa, waxay u badan tahay in aad hesho mushaharka sare .
Hagaajinta fursadaha shaqaaleyntaada
Rugta Ganacsiga Britishka ayaa dhowaan soo warisay in 60% shirkadaha doonaya in ay ganacsi ku sameeyaan dibadda dib loogu celiyo sababaha luuqadaha luuqada ah. Haddii aad tahay qof leh xirfadaha luqadaha dheeraadka ah, waxaad ka kici kartaa koontada.
Noqo shaqaale fiican
Barashada luuqad kale waxay muujinaysaa xiisaha dhaqamada kale, maskax furan iyo edbin maskaxiyan ah - dhammaan xirfadaha qiimaha leh ee raadinaya shaqo bixiyeyaasha, gaar ahaan kuwa leh dano dibada ah. Haddaad bilowdo inaad barato erayada iyo naxwaha luuqad kale, adiguba waxaad kala hadashaa alsostarttounderstandthatwe waa qayb ka mid ah adduun isku xiran. Shaqo bixiyeyaashu waxay si firfircoon u raadinayaan dadka dhaqan ahaan xasaasiyad leh. Sidoo kale waxay rumaysan yihiin in xirfadahan ay kaa caawiyaan isdhexgalkaaga, xitaa markaad ku hadlaysid Ingiriis.
Hore dhakhso u sii
Laga bilaabo maanta iyo da'da, wax kasta oo ku siinaya tartan tartan ah ayaa kaa caawin doonta inaad hagaajisid rajooyinkaaga. Inta badan, luqadaha ajnebiga ah waa kuwa kala qaybiya murashaxiinta tartanka isla goobta - gaar ahaan haddii ganacsigaagu uu leeyahay danaha dibada. Waayo-aragnimada laxiriira fahamka kale ee dhaqdhaca kale ee dhaqameedka .Laakiin luqadaha kale ayaa kuu furi kara albaabada aad adigu leedahay. Laakiin si fiican ayaad u hadashaa, si fiican ayaad u shaqeyn kartaa. Halkaas, waxay u horseedi kartaa masuuliyad ka saaran oo ay la socoto mustaqbalka iyo mustaqbalka.
Lex Baker, Agaasimaha Maamulka iyo Maamulka Ganacsiga Franchise WSE wuxuu u shaqeynayey WSE muddo ka badan labaatan sano, waxaana uu u muuqday in uu gacan ka geysto saameynta barashada Ingiriisiga ee nolosha dadka. .Haddii aad jeclaan lahayd in aad wax badan ka ogaato sida laguu tixgelin karo fursadda aduunka oo dhan, la xiriir Lex Baker,
Server time: 09:40:02 Account Level: 0
Total XP: 56.20/100.00